Akachipa OBB Chitiketi Matikiti Uye Kufamba Mitengo | Chengetedza Chitima
2. Nezve OBB 3. Pamusoro Pfungwa Kuti Utore Ahibhura OBB Chitiketi Tiketi
OBB inopa mabasa echitima mukati meAustria uye neEuropean. Tiketi chaipo, unogona kushanyira zvese zvakanakisa nzvimbo dzekuzorora muEurope. Nemhando dzakasiyana dzematikiti uye makadhi kunyoreswa, OBB inopa kune wese wese zvinodiwa.
Matikiti echitoro cheOBB ari zvakachipa panguva yekubhururuka-yepamusoro, pakutanga kwesvondo, uye masikati. Iwe unogona kuve nechokwadi chekuwana isingadhuri chitima matikiti mukati mevhiki. Musi weChipiri, Chitatu, neChina, Matikiti echitima eOBB ndiwo ehupfumi zvakanyanya. Nekuda kwehuwandu hwevashandi vebhizinesi vafambi vanoenda kubasa mangwanani nemanheru, matiketi echitima anodhura akawanda. Izvo zvakachipa zvakanyanya kufamba chero nguva pakati pekusvika mangwanani uye manheru manheru kuenda. Kupera kwevhiki ndiyo imwe nguva yepamusoro yezvitima, kunyanya neChishanu uye Mugovera. Mitengo yetikiti yeOBB inowedzerawo pa zororo revanhu uye zororo rechikoro.
OBB zvitima vari kudiwa zvakanyanya, uye nemakwikwi mashoma, parizvino vanoramba vari sarudzo yepamusoro yezvitima muAustria. Ivo vanokwanisa kukwanisa kumisa zvitambi zvechitima senge izvo zvavanazvo zvinorambidza kuchinjanisa matikiti kana kudzoserwa kunze kwekunge iri iro Bhizinesi remhando yetikiti.. Kunyangwe paine mamwe mawebhusaiti maunogona kutengesa matikiti ako echipiri ruoko kuvanhu, OBB haibvumiri kutengesa kwechipiri-ruoko tiketi. Izvi zvinokubatsira sei kuchengetedza mari? Ronga tikiti rako chete kana uine chokwadi nezvechirongwa chako chinogona kukuchengetedza kubva kubhuku rimwe chete tikiti nekuti chimwe chinhu chakauya uye haugone kushandisa litikiti rekare.
Matikiti eOBB Komfort anogara ari OBB matiketi, uye ivo vanoitirwa kubatana kuburikidza nechitima husiku. Iyo OBB Komfort tikiti inovhara mutengo werwendo, kuchengetwa kuri muchikamu chekufamba chakasarudzwa, uye kudya kwemangwanani mukamuri yekurara.
Kune vagari venzvimbo, kune marudzi maviri ekunyorera, iyo Vorteilscard neOsterreichcard. Kune veInternationals tinokurudzira kutenga nguva yakareba pamberi uye ipapo uchaunzwa nesarudzo yakachipa.
Vapfuuri vanogona kutenga Osterreichcard Classic. Iine Osterreichcard Classic, ivo vachagamuchira mutero we 100% pamutengo wekuchengetedza zvigaro zvekirasi yekutanga neyechipiri. Ndiine Osterreichcard Classic yechipiri kirasi, unogamuchira a 50% kuderedzwa pane shanduko yekirasi kubva 2nd kusvika 1st kirasi ine yakajairwa mhando imwe tikiti.
Mabhasikoro anotenderwa pazvitima zveOBB chero bedzi iwe ukatenga tikiti kwavari pachiteshi. Vanodhura € 2 pabhasikoro.
iwe kugona boOK munhu ndinozivapa kufanoita pamusha OBB zvitima zve 3 euros. iwe chido tora wega chigaro mushure mekugadzirisa.
Ehe. Unogona kunakidzwa Yemahara WiFi internet pamaseti ese OBB uye ese makirasi ekufamba kana iwe uchitenga OBB matiketi (Zvikurukuru paSaveATrain.com).
Kana iwe wakaverenga kusvika panguva ino, unoziva zvese zvaunoda kuti uzive nezve OBB zvitima zvako uye wagadzirira kutenga yako OBB chitima chitima pa Chengetedza Chitima